Senzeka kumuphi umuzi ukuthuthela Russia: lesilinganiso. Lapho ukuthuthela Russia nengane encane? Senzeka kumuphi umuzi kakhulu ukuqhubeka eRussia?
Kwezinye izimo, umuntu akucabangayo mayelana nokuthi iziphi izinhlelo idolobha ukuthuthela Russia. Izizathu ngesinqumo esifana kungaba mass, kodwa indlela ukukhetha indawo esizayo yokuhlala - umbuzo ayivelanga elula. Umhlahlandlela kukhethwa lokho okufanele sikulindele esikhathini leli dolobhana elisha ngokuthi, okuyinto izimo zezulu, ukuthi umsebenzi uyoba nokunye. Ngakho umuzi ukuthuthela Russia kungcono? On lo mbuzo sizozama ukuthola impendulo kulesi sihloko.
Abantu ngokuvamile thukela unquma shintsho olukhulu lokuhlala. Zikhula futhi lumphefumulo ngomuzi lwakubo, abantu ajwayelekile kanye nezindawo, emsebenzini, ekhaya, nokunye. Kodwa zikhona izikhathi lapho ezihambayo - kuphela indlela yokuphuma. Ngezinye izikhathi lesi sinqumo kanjalo kusenta sibe isikhathi eside ukucindezeleka, isizungu, futhi ngezinye izikhathi - ukuntuleka indawo enhle yomsebenzi noma ukufunda, kanye nokungakwazi athuthukise. Kukhona umuzwa wokuthi ukuphila ime kuyo leyo ndawo, kanye nemicimbi musa ukuthuthukisa.
Isizathu sokuba ushintsho nendawo yokuhlala angase abe izenzo sina kwezomnotho noma wezempi. Mhlawumbe phela isimo sempilo zidinga ushintsho ngokushesha. Senzeka kumuphi umuzi ukuthuthela Russia? Ngayinye uma umuntu has isixazululo wona kangcono.
Ku- dolobha e-Russia kungcono ukuthuthela kuyo, ixhomeke ezimweni. Ngaphambi kokuba unqume, qiniseka ukuba bacabange ngalokho ebangela uqondiswa futhi wena ulindeleni endaweni entsha yokuhlala. Nenqubo yokukhetha kungenzeka eziningana. Senzeka kumuphi umuzi ukuthuthela Russia, uma uhlangabezana nobunzima kwezomnotho? Lena ngenye empikiswanweni. Kodwa hambisa ngenxa yezizathu zempilo - kuhluke ngokuphelele. Kubalulekile futhi acabangele ukuhamba yabo, inani izibopho kwabanye abantu kanye nezikhungo.
amadolobha eziphezulu eRussia
Ukuze anqume ukuthi iyiphi idolobha ukuthuthela Russia kangcono, ungakwazi ukufinyelela izibalo. ukubalisisa kwabo uveza ngesisekelo izinkomba ezilandelayo: ezingeni zobugebengu, isimo kwemvelo endaweni, degree of ukuthuthukiswa zangaphakathi nezangaphandle ezokuthutha izixhumanisi, ukuqina isimo abantu, izinga izakhiwo zezindlu, inombolo yabo, njengoba ihlela ukwakhela izindlu eminyakeni ezayo, njengoba izakhiwo waqala okwamanje ukusebenza kwezempilo nemfundo izinhlelo, izimo amabhizinisi amancane kanye naphakathi.
Izibalo uyakucabangela indlela lapho izakhamizi ukuthenga indlu, ngokuvamile kukhona ukuphumula phesheya, ungathanda ukuthola imfundo yabo ngaphakathi Lapho ngishumayela endaweni ezungeze idolobha noma ushiye yezinye, inkulu kangakanani umehluko phakathi lemali ikhokhwe nezindawo isabelomali emayunivesithi. Ucabangela izinga of ubudlelwano izakhamuzi nezinye izinhlanga, izizwe, izinkolo, orientation.
Izindawo ezidumile ukusebenza
Inkinga yezimali kanye ukuhlupheka kuka-ke imindeni leminyenti yalabamnyama unamandla ngokwanele ukuba uthuthele eminyakeni yamuva. Abanye abantu baya kohlala kwamanye amadolobha ukuze uthole imali, washiya umkhaya wakhe ezweni lawo mlando. Abanye bathuthela lonke. Umbuso wasungula uhlelo sokuthuthukiswa ezindaweni ezithile kuleli zwe. Lezi zinhlelo ukunikeza ukuxhuma ku nokuzinikeza izindawo zokuhlala, imixhaso kanye nezinzuzo. Lezi zinhlelo zisebenza ekuthuthukisweni kwezindawo zasemakhaya, obzhivanie izindawo wezwe enyakatho futhi engxenyeni esentshonalanga. Ngakho uma kukhona umbuzo lapho ukuthuthela Russia ngenxa izinkinga zezimali, impendulo isobala.
Ingqalasizinda is hhayi kahle kukhona, kodwa uzothola izindlu zabo, amaholo aphezulu, unomphela endaweni esitebeleni umsebenzi nezinye amabhonasi ewusizo. Nokho, akubona bonke laba izindawo Site ukuphila okunethezekile nezingane ezincane. Amasosha omzimba ezinganeni akuyona njengoba oluthambile futhi babathola esitebeleni, njengoba abadala. shintsho olwenzeka isigubhukane we sezulu esipholile on the ungakhululekile kungabangela izinkinga zempilo ezingathí sina, kanye nokwentuleka kwezingqalasizinda ezindaweni ezikude akazange neqhaza ngcono. Uma zomnotho zidinga ezihambayo ngesikhathi esifanayo unayo ingane encane, kungcono ukuba ukhethe emzini ukuba ngempela abalelwa esigidini noma cha emaphandleni akude kakhulu. Emadolobheni ngenombolo enkulu imisebenzi okuningi cishe uyokuthola umsebenzi, kanye netimo tekutsi ukuvula ibhizinisi siqu eningi.
Kunezikhathi lapho kuthuthwa okubangelwa ngezinga engamukeleki ka ukuvaleka imvelo nge qeda amagesi nezinye ezinobuthi. impilo babantu bangase ziwohloka laqonda waze wagcina alinge sihambe kule ndawo. Lapho ukuthuthela Russia ukuthuthukisa impilo? Kulokhu, kunengqondo ukuba banake emzini Krasnodar esifundeni. Le ndawo inesimo sezulu sasivumela omnene, it is kakhulu evuthiwe uhlelo lokunakekela ezempilo.
Krasnodar abadumile ezigcina umthetho emizini yabo ngenxa ekuqiniseni amandla okulawula imizimba umthetho futhi wokuvikelwa. Krasnodar esifundeni uqhosha emaphandleni yayo, labantu abaqashwe emikhakheni yezebhizinisi siqu kanye nezincane. Minyaka yonke labelwe izizumbulu zemali yomphakathi kuze kuzolungiswa imigwaqo yase, ukunakekelwa kwezempilo kanye nemixhaso abalimi imfundamakhwela. Ngakho uma kukhona umbuzo, kumuphi umuzi ukuya Russia siphile ngokuhluzeka sokuchitshiyelwa izimo zezulu bese ngempela sinake Krasnodar nasezindaweni ezizungezile. Ngaphandle izindleko izindlu ezintsha lapha ephansi kakhulu kunalokho kwamanye amadolobha amaningi.
Ukukhetha ngemindeni nezingane
Lapho umndeni ingane encane, kuba nzima ukukhetha waseRussia edolobheni. Lapho ukuhambisa kulesi simo?. Ukuze siphile endaweni entsha kwase kuphephile futhi ukhululekile, kufanele sinake izinto ezikhethekile. Ukuze ingane, kubalulekile ukuthi kukhona inombolo ezanele izinkulisa, izikole, amakolishi kanye amanyuvesi.
Isikhathi siyaphela ngokushesha okukhulu, futhi ngokushesha kuyomelwe ukuba abhekane nezinkinga imfundo. Inani elanele izinhlangano zokwelapha, uhlelo evuthiwe ukusizwa izifo ezihlukahlukene kubaluleke. Futhi imikhaya nengane ngokuvamile emadolobheni isiRashiya ukuphila kuyo, kunqunywa ezingeni zobugebengu. I ephansi kangaka, ephephile bazozizwa nabazali. Isimo sezulu akufanele kube kakhulu ezahlukene kulokho eqale iyikho. Isikhathi eside futhi kanzima acclimatization - hhayi kube nomphumela omuhle kakhulu we hambisa okungazelelwe. Khetha idolobha eliseduze esishintshashintshayo yakho yangempela zezulu.
Senzeka kumuphi umuzi ukuthuthela Russia: Yaroslavl
Yaroslavl - edolobheni isindala kakhulu futhi emuhle. Ukubukeka ezitaladini, amasonto efana nomuntu singena umlando Russia. Nobuhle Yiqiniso, akuyona umbandela wokugcina kukhethwa Yaroslavl, njengoba idolobha zokuhlala unomphela. Lidonsa futhi sezulu layo. Bheka esipholile ezwekazini. Ehlobo izinga lokushisa ifinyelela nesishiyagalombili ezingamashumi amabili nanhlanu degrees. Edolobheni eziningi emifuleni, ngokuvamile lina. Ngakho-ke, ngisho ezishisayo izinsuku ehlobo adluliselwe ngempela kalula. Cishe asikho isomiso, okungakwazi kodwa jabulani.
Winter e Yaroslavl abandayo ngokwanele, omude, ngokuvamile, mini ngekhephu. Ukushisa okuvamile kuba kusukela degrees -11 kuya -13. Kugcine izimo ezinjalo sezulu izinyanga eziyisihlanu. Population ngu 96% Russian. Edolobheni kukhona azibe ngu eziyisikhombisa likhulu lamawaka. Lena sibalo Russia kunalokho nesizotha. Abaningi uthuthe lapha Kazakhstan. Kepha ingqalasizinda yaleli dolobha, ngokuvamile, kuba egculisayo. Zonke izinsiza inkonzo ukusebenza cishe nakanjani. Kwaphela amakhulu amabili okulala efulethini ngenyanga, izakhamizi akhokhe amabili nesigamu kuya ruble ayizigidi ezine. Lo sayizi ebhodini kamasipala omunye aphansi emizini Russian.
Lapho abantu bazibuze kumuphi umuzi ukuthuthela Russia, cishe impendulo okuqala eMoscow Petersburg. ukukhetha okunjalo Kuyamangaza ngempela. Bobabili inhlokodolobha wavula eziningi amathemba izivakashi, kodwa ikhefu kuzoba nzima impela. Yiqiniso, le enkulu imali umjovo kusukela isimo ewela edolobheni. Phela, nansi ingqalasizinda engcono, lenqwaba imisebenzi, kungenzeka ukuthuthukisa ibhizinisi zabo siqu, izikhungo yodumo zemfundo kanye okusezingeni eliphezulu lokube nawo ezingeni lekuphila. Esikhathini simo emadolobheni ngokuvamile basuke ngisho kunakwe ngenxa isimo esemthethweni. ukukhetha okunjalo kuhle intsha kanye beziphakamisa labo abahlela ukwakha ezimpilweni zabo, cwaningo lapha, ukuthuthukisa umsebenzi. Kepha isimo sezulu, kuba impela cool nemvula.
Petersburg - idolobha belusizi kakhulu. Ukuntuleka kokukhulumisana ilanga kungonakalisa unomphela isimo izivakashi ezivela ezindaweni eseningizimu yezwe. Lapho ebuzwa ukuthi yimuphi umuzi ukuthuthela Russia nengane encane, Petersburg naseMoscow angabhekwa kukho okuhle. Noma kunjalo, izimo zokuphila lapho ngempela bangcono kwezinye izindawo eziningi. Kodwa okokuqala, kufanele ube headroom okwanele kwezimali. Izindleko izindlu ngamanani kula madolobha siphakeme kakhulu kunalokhu. Ekuqaleni kuzodingeka akhokhe izindleko izindlu kanye nokuphila zigcine zanqwabelana, ngakho-ke akwaziwa ngesivinini esingakanani uzokwazi ukuthola umsebenzi omusha.
Lapho ebuzwa lapho ukuya bukhoma ukuba bathuthele eRussia, Rostov-on-Don akuyona kude ngemuva izikhundla simo. Muva nje, esikhathini Rostov esifundeni ngenkuthalo ekuthuthukiseni ezolimo. Isimo sezwe ekahle yokulima kanye ranching. izindawo enkulu selekelelo isimo ochwepheshe abasebasha, ukubamba iqhaza eliqavile lalokhu okulandelayo Izishoshovu abasha esifundeni - konke lokhu kunezela Rostov plus omkhulu ngokuya esinikezwe imvume yokuba yisakhamuzi. Umuzi ngokwayo ababalelwa ezigidini ezintathu izakhamuzi, okuyinto inombolo ngempela appreciable. izinhlangano Private bayatfutfuka kahle, lokhu kusilela e emsebenzini cishe ningagcini.
Isifunda idume eningizimu sezulu nehlobo yayo ashisayo futhi ngempela ukhululekile, hhayi kubanda kakhulu ebusika. Indawo lapha ngempela eqolo, kodwa eminyakeni ezayo, kuhlelwe ukwanda ezinkulu ka imikhawulo emzini, detuning izindawo ezintsha zokuhlala. Izikole, izinkulisa, amanyuvesi ezidumile lapha ngokuchichimayo. Futhi kule Southern Federal University ucwaningo hhayi kuphela Abafundi abavela kwamanye amadolobha ngisho nakwamanye amazwe. Labantu wehlukile kakhulu ngekwebuhlanga nangenkolo. Kodwa abantu abasakwazi ukubekezela ukuze izakhamuzi futhi izivakashi izivakashi.
Lapho ebuzwa ukuthi yimuphi umuzi ukukhetha ukuphila isiRashiya, abantu ngokuvamile ukukhetha indawo eduze oLwandle Olumnyama. Okwamanje kuba indawo ngokwanele athuthukile. Ngemva Olympics zokugcina, Sochi sisonke baba elinye lamadolobha okuholela ezweni. Yakhiwa omkhulu efulethini izakhiwo, izinhlangano zokungcebeleka nokungcebeleka, nokunye. Izindleko abahlala lapha imayelana kuyafana kwamanye amadolobha asethuthukile. Nakuba bokudabuka lapha alikho ngempela. Izizwe bayalingana ukusabalala kahle esikhulu. Futhi abantu Russian nezakhamuzi ne izimpande empumalanga lapha ngezabelo mayelana elinganayo. I sengqondo sabantu ngokwanele kushisa omnene, kodwa izivakashi zinhle. Ibhizinisi ngokuyinhloko yangasese futhi zonyaka, nakuba ezinye umsebenzi ingatholakala lapha ngempela. Ejabulisa sezulu ugu.
In izifo eziningi ezingelapheki ngokuvamile kuphela indlela ukuzizwa kuyindlela ukuhambisa ukuphila eduze kolwandle. Lapha-ke kuwusizo ukungakhululeki eziningi. Ngokwesibonelo, kulezi zindawo izifo emangalisayo uswidi ithambo futhi uhlelo zemisipha, ezinezinkinga zokuphefumula, isifuba somoya, kwezinye izimo ezinzima kakhulu ukungabi nenzalo nokunye. indawo emnandi kakhulu izingane nge izinhlelo ababuthakathaka mzimba. izinga lokushisa ehlobo ukufinyelela highs, kodwa eduze kolwandle ukuthola kwamaphutha zonke imiphumela engasi mihle ukushisa. Ebusika, izinga lokushisa thukela lize liba ngaphansi kwe-zero degrees.
Senzeka kumuphi umuzi ukuthuthela Russia: simo
izilinganiso ezisemthethweni Rosstat ungafaki emadolobheni ezifana eMoscow Petersburg. Kuhleli obala ukuthi okuqukethwe kwabo inombolo elikhulu amabutho nemali isabelomali. Phakathi kweminye imizi ke ingenye abaholi elisentshonalanga. It has aphansi lobugebengu. By the way, ngaphezu bugebengu, Bypasses ezinye izimbangi ngezindlela eziningi. Isici kuphela engakwazanga ukuphuma endaweni yokuqala, - uma elahlekelwe umsebenzi. Omunye umuzi rankings phezulu e - Novy Urengoy, osekuyinhloko uwoyela wezwe lakithi elikhulu. Okulandelayo ohlwini - Kazan. Kuyinto umuzi Universiade futhi ezingeni eliphezulu wehlelo lefundo zombelele.
Student Novosibirsk kubuye omunye ezikhanga kakhulu ongakhetha ukuthutha. ethile yayo kuphela - kunomoya kakhulu. Ikakhulukazi ithuthukiswe le shipbuilding idolobha kanye abahamba olwandle. Inani elikhulu of hit phezulu simo emadolobheni esifundeni Moscow. Kwenzeka ngenxa yokusondelana zonke bezinhlangano eziphethwe uhulumeni osendaweni ezibalulekile, izimo ezahlukene kwemvelo, kanye iholo ingqalasizinda. Nokho iningi labantu ezweni lethu bakholwe imizi best eMoscow Petersburg. Lokhu kakhulu ohlelwe edolobheni, etholakala maphakathi Izikhumulo ezokuthutha ezibaluleke kakhulu. Lapha amathemba ethembisayo namaholo aphezulu. Abantu abasha abafuna izindlela iSilekeleli Sokwazisa, it ukhetha ukuya enhlokodolobha.
Imindeni nakakhulu igxile nedlelo ngesimo sezulu esihle futhi ngemuva kwemvelo. Abantu abanezifo ezingamahlalakhona uncamela zonke ezinye izindawo ezisogwini lapho ukugula ekugcineni yadedela inhlalakahle kanye sezulu imnene izimo. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, Motherland yethu makhulu, ngakho kukhona indawo kuwo wonke umuntu!
Umkhoma ushaka - izinhlanzi enkulu kunazo zonke emhlabeni
High-amandla LED: amathemba kwesicelo kanye izinzuzo main
Zachekinitsya: kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani?